केपी ओली नभएपनि नेकपा चल्छ, अब बैंठक बसेर भटाभट निर्णय गरेर जानुपर्छ…हेर्नुहोस।
पार्टीमा विवाद छ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग नै छ, तर यो संकटबाट पार्टीलाई कसरी जोगाउने ?
–म त भन्छु, अब कमरेडहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । उहाँहरुको अगाडि ठूलो चुनौती छ । उहाँहरुले त्यो चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु हुन्छ भने मलाई विश्वास छ ।
‘खुट्टा कमाउनु हुँदैन’ भन्नुभयो, यसको अर्थ के हो ?
–उहाँहरुले छलफल गर्नुहुन्छ, पार्टीबाट निर्णय गर्नुहुन्छ । सचिवालयको बैठक बोलाउनु भएको छ । सम्भवतः आज (बुधबार) बस्छ होला । सचिवालयको बैठकपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा लग्नुपर्छ । स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न भएपछि त्यसलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा लाग्ुपर्छ । पार्टीलाई लाइन अनुसार चलाउने यो नै महत्वपूर्ण प्रकृया हो । मंसिर १५ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकमा पनि यो बहसलाई लैजान सकिन्छ । अब उहाँहरुले निर्णय गर्ने बेला आएको छ । सबभन्दा शक्तिशाली भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक हो । त्यो बैठकबाट पार्टीका तमाम समस्याको निर्क्यौल गर्नुपर्छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ कि म पार्टीको निर्णय पनि मान्दिनँ, कुनै बैठकमा आउदिनँ र एक पक्षीय ढंगले निर्णय गरे पार्टी फुट्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको छ । तपाईहरु पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरी हुन्छ भनिरहनु भएको छ, समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?
–उहाँले घुर्की देखाउनु हुन्छ । अहिले बैठकमा आउन थाल्नु भएको छ । उहाँले डर देखाएर, हप्काएर पार्टी र सरकार चलाउन खोज्नुभएको छ, त्यो अब चल्दैन भन्ने कुरा सायद उहाँले बुझ्नुभएको छैन । बुढेसकालमा केटाकेटीपन आउँदो रहेछ, सायद त्यही नै उहाँमा आएको छ जस्तो लाग्छ । उहाँबाहेक पनि थुप्रै बैठक बसेका छन् । निर्णयहरु पनि भएका छन् । अहिले पनि उहाँ नआए अब कुरेर बस्ने होइन, अगाडि बढ्छ र बढ्नु पनि पर्छ । एकजनाका लागि देश र पार्टीलाई बर्बाद हुन दिनुहुँदैन ।
नेता मातृका यादवसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सानो अंश ।